Ma Ogtahay in Google Keydiyo Macluumaadkaaga? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Saadaashii Xorriyadda iyo Saranseerkii Dawladnimada
BBC Somali — October 27, 2018
Google way garaneysaa waxa aad raadineyso, waxa aad daneyneyso, iyo baraha kale ee aad booqato, iyo waxyaabo kale oo badan ayey kaa og tahay. Waxaan ka hadlaynaa Google oo ah barta caalamka ugu wayn ee macluumaad iyo akhbaar laga raadiyo.
Taasi waa sida ay shirkaddan u sheegtay macaamiisheeda, waana leenka ugu horeeya ee shuruucda xuquuqda gaarka ah ee Google. Balse waxa aadan garan karin waa in Google ay ku siineyso fursad aan ku tirto macluumaadkaaga ku keydsan qeybta “my activity” oo keydisa waxa aad ka dhex sameyso barta.
Xilli kasta ee aad Google wax ka raadiso, shirkadda waxay keydineysaa macluumaadka la xiriiro waxa aad raadisay, waxayna ki xireysaa cinwaankaaga. Waxay sidoo kale diiwaan gelineysaa dhaqdhaqaaq kastoo aad sameyso, sida in aad foom buuxiso ama in aad furto cinwaankaaga Gmail-ka.
Google waxay sidoo kale dabagashaa dhammaan waxyaabaha aad ka baarto YouTube. Balse tani xitaa si fudud ayaad uga feejignaan kartaa. Marka hore guji “history” oo ah meesha keydka oo dhanka bidix ah. Ka dib guji “nadiifi dhammaan wixii aan baaray”, ama waxaad si gaar ah u raadin kartaa waxyaabaha qaar ee si gaar ah aad u daawatay.
Ha u maleynin Google in ay macluumaadkaaga ay keydineyso oo keliya, balse waxay u sii gudbineysaa dadka wax xayeysiiya. Taasina waa sababta aad markasta u aragto xayeysiis xiriir la leh waxa aad raadineyso ama daawato. Laakiin haka walwalin – waxaad ogaan kartaa macluumaadkaaga loo gudbiyay kuwa xayeysiinta sameeya. Sida aad u tirto, fur cinwaankaaga Google ka dibna gal meesha ay ku qoran tahay “Personal info & privacy” ee akhbaartaada gaarka ah keydisa.
Haddii aad isticmaaleyso shay ku shaqeeya Android, Google waxay keydineysaa diiwaan la xiriiro baraha aad booqatay adigoo adeegsanaya mobile-kaaga ama Tablet. Si aad macluumaadkan oo dhan uga tirto Google Maps, waxaad u baahan tahay in aad boggan booqato.
Tags: Ma Ogtahay in Google uu Keydiyo Macluumaadkaaga?
Next post 7 Arrimood Ka Ogow Dalalka Barwaaqo Sooranka
Previous post Maxay Tahay in Aad Sameyso Hadduu Kugu Dhaco Cudur Lagu Qaado Galmada?